तस्विर Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अनौठो समाचार / जोक तथा कार्टून / मनोरन्जन
यो तस्विरलाई राम्रो सँग हेर्नुस् ! अनि भन्नुस् यसमा कति जना केटी छन् ???
खासमा यो तस्विर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भाइरल बनेको छ । स्वीट्जरल्याण्डका फोटो ग्राफर तिजियाना वर्गरीले खिचेको यो तस्विरमा कति जना केटी छन् भन्ने बहस संसार भरी भैरहेको छ । कतिपयले यो तस्विरमा केवल ३...
यी ब्यक्तिहरुको उमेर कती होला ? तस्विर हेरेर अनुमान लगाउनुहोस् त !!! फोटो सहित….
तस्वीरमा देखिएका व्यत्तिहरुको उमेर कति होला? अनुमान लगाउनुहोस् त । पक्कै तपाईले यिनिहरु ६०,७० वर्षका बृद्धा होलान् भन्ने सोच्नु भयो होला । तर तपाईले कल्पना गरेको भन्दा यिनिहरुको उमेर निकै फरक छ । यिनिहरु...